Ajuju ise inyocha ahia gi na ahia gi | Martech Zone
Tọzdee, Machị 19, 2009 Saturday, October 18, 2014 Douglas Karr
Okwu a na-arapara m n’izu gara aga:
Ebumnuche nke ịzụ ahịa bụ ire ahịa. Ebumnuche nke ịzụ ahịa bụ ịmara ma ghọta onye ahịa nke ọma na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ dabara ya wee ree onwe ya. Peter Drucker
Site na ihe ndi mmadu na-ebelata na ibu oru na-abawanye maka onye na-ere ahia, o siri ike idobe ihe mgbaru ọsọ nke ahia gị. Kwa ụbọchị, anyị na - emeso ndị ọrụ nsogbu, mwakpo nke ozi ịntanetị, oge ndị a na - egbu oge, mmefu ego - ndị niile na - ewepụ ihe na - akpata azụmahịa.
Y’oburu n’acho ka ahia ahia gi gha akwu, ig gha aghaputa ihe omume gi nke oma mgbe nile. Ndị a bụ ajụjụ 5 iji nyere gị aka iduga gị n'ahịa mmemme dị irè karị:
Ndị ọrụ ahụ bụ ndị na-eche ndị ahịa gị ihu, ma ọ bụ ndị njikwa ha, mara ozi ị na-ezi site n'usoro ahia gi? Ọ dị mkpa, ọkachasị ndị ahịa ọhụrụ gị, ka ndị ọrụ gị ghọta atụmanya atọrọ na usoro ahịa na azụmaahịa niile. Expectations gafere atụmanya na-eme ka ndị ahịa nwee obi ụtọ.
Ndi ahia ahia gi na-eme ka ọ dịrị ndị ahịa gị mfe ire ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị? Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị ga-enyocha ihe mgbochi ndị ọzọ iji tọghata onye ahịa ma tinye usoro iji merie ha.
Ndi nke onwe, otu na ngalaba ebumnuche n'ime nzukọ gị niile kwekọrọ na mbọ ahịa gị ma ọ bụ na esemokwu na ha? Otu ihe atụ bụ otu ụlọ ọrụ na-esetịpụrụ ndị ọrụ ọrụ ebumnuche maka ọrụ nke na-ebelata ezigbo ọrụ ndị ahịa, si otú a na-ebelata mbọ ị na-ere ahịa.
You nwere ike ịkọwapụta ndị laghachi na ntinye ego ahia n'ihi na onye ọ bụla nke gị azum? Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-adọrọ mmasị na ihe ndị na-egbuke egbuke kama ịlele ma ghọta kpọmkwem ihe na-arụ ọrụ. Anyị na-achọkarị gravised na-arụ ọrụ anyị dị ka ịrụ kama ịrụ ọrụ na-enyefe.
You wuru a nhazi usoro nke usoro ahia gi? A usoro map na-amalite na nkewa nke gị atụmanya site size, ụlọ ọrụ ma ọ bụ isi iyi… mgbe ahụ na-akọwapụta mkpa na mmegide nke ọ bụla… wee mejuputa ihe kwesịrị ekwesị measurable atụmatụ iji chụọ nsonaazụ ka a ole na ole Central ihe mgbaru ọsọ.
Inye ọkwa a zuru oke na mmemme ịre ahịa gị niile ga-emeghe anya gị na esemokwu na ohere dị n'ime atụmatụ azụmaahịa nke ụlọ ọrụ gị. Ọ bụ mgbalị ị ga-eme ngwa ngwa karịa ka oge na-aga!
Tags: nhaziọrụahịa dị n'imeitinye n'ọnọdụ ahịaahia na ire ahiaesemokwu ahịanhazi usoro ihe ahiaahia ihe mgbaru ọsọmarketing atụmatụndozi oziPeter DruckerPeter drucker see okwuitinye n'ọnọdụ ahịaire ahia na ire ahiaNkwado ire ahịaitinye n'ọnọdụ ahịa ahịa
Iji jQuery mee ka ihe ọ Juụiceụ gaa Web peeji nke
Mar 20, 2009 na 10: 31 AM
Talking na-asụ asụsụ m. Aghọtabeghị m ihe kpatara na ndị mmadụ enweghị usoro yana site na kalenda abụghị usoro. Usoro na-arụ ọrụ ma ọ bụrụhaala na emelitere ma melite ya mgbe niile. Ndị mmadụ na-ahapụ ngwa ngwa n'ịgbalị ịzụlite otu na ihere ya niile bụ; Ego ole ka ezi echiche ga-esi mebie n'ihi usoro adịghị mma?
Ezi post! Karịsịa, mgbe ị na-eche echiche dị ka m! :)
Mar 20, 2009 na 11: 37 AM
Nke a bụ ezigbo ije site na usoro azụmaahịa ọ bụla. M ugbu a na-achọ ọhụrụ ahịa usoro maka ụlọ ọrụ m na enweghị ezigbo ahịa ndabere. Nke a blog bụ nnukwu ngwá ọrụ maka m.
Mar 23, 2009 na 10: 05 PM
Nọmba nke abụọ dị oke mkpa maka nzute ebumnuche ahịa. Ahụla m ebe ha kpọrọ ahịa, ndị otu na-egbochi ire ahịa!
Nkwupụta Maazị Drucker, na nkwanye ùgwù, bụ obere ihe. Kwesịrị ka mkparịta ụka ahụ bụrụ:
? ebumnuche nke ire, mgbe ahụ, ọ ga - abụ ịme ahịa ahịa? Ebumnuche nke ire ahịa bụ ịkọrịtara onye ahịa nke ọma na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ adịghị mkpa ka ere ahịa?
- Ọ dịghị onye na-esi na ya pụta